Tena mbola mila mitandrina | NewsMada
Tena mbola mila mitandrina
Par Taratra sur 10/11/2021
Amin’izao, sekoly roa no voatery nakatona mandritra ny 15 andro ao Morondava, faritra Menabe, noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Voafehy ny toe-draharaha? Na izany aza, tena mbola mila fitandremana. Fahavalo tsy hita maso ny tsimokaretina Conoravirus, tsy mampandre mialoha, tsy mifidy olona… Hampahatsiahivina indray ve izay nandritra roa taona latsaka niatrehana ny ady mivantana izay?
Na ahoana na ahoana, tsy mbola resy tosika tanteraka ny fahavalo iombonana: eny ho eny ihany… Izay no itakiana mandrakariva ny hoe mila atao fomba fiaina ny fiatrehana azy. Toy ny fiaraha-miaina amin’ireo karazana areti-mifindra mbola tsy mahafa-bela tanteraka eto Madagasikara: tazomoka, ohatra, na pesta. Tsy misy toy ny fahamalinana ihany aloha ny fiatrehana azy andavanandro sy mandavantaona.
Amin’izany, aiza ho aiza ny fitandroana ny fepetra sakana ara-pahasalamana mba tsy ho azon’ny aretina ny tena, mba tsy hiparitahan’ny valanaretina? Eny, na efa nofoanana elaela ihany aza ny hamehana ara-pahasalamana. Laingalainga, efa saika tsy mihevitra firy izany intsony ny maro? Tsy manao arovava eny rehetra eny, tsy manaja izay elanelana iray metatra, tsy manasa tanana matetika… Hanao ahoana?
Mbola amperin’ady izao, na farafaharatsiny ahay ao anatin’ny fitandremana tanteraka. Saika maneran-tany izay, fa tsy eto Madagasikara ihany. Miverina amin’ny fanaovana arontava, ohatra, ny any Frantsa; na vao nanokatra sisintany aza ny any Etazonia, tsy maintsy vita vaksiny vao tafiditra… Misy efa tafiditra amin’ny andiany fahadimy ireo firenen-dehibe sasany? Na ahoana na ahoana, aleo malina ihany.
Na eo aza ny vaksiny fanefitra sy ny fanafody fitsaboana, tsy misy afa-tsy ny fitandremam-pahasalamana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra sakana no isorohana ny mety ho fiverenana na firongatry ny aretina. Aleo misoroka toy izay mitsabo, aleo milamina amin’ny fanajana fepetra toy izay misaritaka amin’ny ady mivantana, aleo malalaka amin’ny fiainana andavanandro toy izay hihiboka indray…